ओली–एकनाथ कनेक्सन: जसबाट नेपाललाई खतरा छ ! - ओली–एकनाथ कनेक्सन: जसबाट नेपाललाई खतरा छ !
ओली–एकनाथ कनेक्सन: जसबाट नेपाललाई खतरा छ !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १५ मंसिर, 09:30:40 AM
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगे । गत महिना उनी अमेरिका मात्रै पुगेनन् । उतैबाट कम्बोडियाको भ्रमण गरेर आए । कमै नाम सुनिएको र नेपालले खासै फाइदा लिन नसक्ने देशको भ्रमणमा ओली किन पुगे ? भनेर धेरैले चाँसो राखे । तर सही जवाफ भेट्न मुश्किल भयो ।
अहिले थाहा हुदैछ, झण्डै तीन दशक यता कम्बोडियामा तानाशाही सत्ता लादेका प्रधानमन्त्री हुन सेन काठमाडौ आए । त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक निमन्त्रणमा ।
तर अवसर यस्तो जु¥यो की, एउटा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन । जुन नेपालका लागि उत्पादक भन्दा बढी प्रत्युत्पादक छ । अझ एक कदम अगाडी भन्दा हानिकारक नै देखिन्छ ।
सम्मेलनका भाग लिन हुन सेन काठमाडौँ आए । तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग द्धिपक्षीय वार्ता गरेर हप्तामा १४ उडान हुने गरी हवाई सम्झौता गरे । म्यानमारकी प्रजातान्त्रिक नेतृ आङ साङ सुकी पनि काठमाडाँै आएकी छन, सम्मेलनका लागि । तर उनलाई पनि सरकारले औपचारिक भ्रमण भनेको छ ।
इसाई धर्म प्रचारका लागि गठित युनिभर्सल पीस फेडेरेशन युपीएफ संस्थाले आयोजना गरेको एसिया प्रशान्त सम्मेलनका लागि उनीहरु काठमाडौ आएका हुन । तर सरकार उनीहरुको सम्मानका लागि औपचारिक भ्रमण भनेर नेपाली नागरिकलाई ढाटिरहेको छ ।
दुई तिहाई बहुमतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बाध्यात्मक अवस्थामा राखेर धर्म–खेल खेलिरहेका छन, नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल । पुर्वमन्त्री समेत रहेका उनी धर्म प्रचार गरेर पैसा कमाई गरिरहेका छन । अनि त्यही पैसाको आडमा राजनीति चलाइरहेका छन ।
उनले आफ्नो सम्मेलन सफल पार्न सरकारबाट आर्थिक सहयोग लिएनन् मात्रै । विदेशी पाहुनालाई राष्ट्रिय सम्मान दिलाउन सफल भए । यो सामान्य बुझाई र अवस्था होइन । भित्री चलखेल त्यत्तिकै डरलाग्दो छ ।
नेपालले यो सम्मेलनबाट केही फाइदा पनि लिएको छ । विदेशी पाहुना आउँदा नेपालले पर्यटन प्रचारको सबैभन्दा ठूलो अवसरलाई प्रयोग गर्न पाएको छ । तर बौद्ध धर्मका अनुयायीलाई इसाई धर्मको कार्यक्रममा बोलाएर त्रिपक्षीय जालझेल किन भइरहेको छ ? यो सायदैलाई थाहा छ ।
प्रधानमन्त्री ओली कम्बोडिया नै किन पुगे ? हुन सेनबाट तानाशाही पद्धति सिक्न ? तानाशाहीका लागि सिद्धान्त र प्रक्रिया बुझ्न ? वा आर्थिक सहयोग लिन ? यो प्रश्न आफैमा सामान्य प्रश्न र त्यसको जवाफ होइन ।
मलेसियाका महाथिर मोहम्मदले तीन दशकमा देशलाई कायापलट गरे । लि क्यान वीले सिंगापुरलाई विश्वकै एक स्वर्ग बनाई दिए । यी दुई देशको विकासे प्रक्रिया बुझ्न अल्छी गर्ने प्रधानमन्त्री आखिर किन पुगे कम्बोडियो ?
यसका पछाडी कतै न कतै धर्म प्रचारक संस्थाको नियत र आर्थिक चलखेल छ । जसको नेतृत्व यतिबेला एकनाथ ढकालले गरेको चर्चा छ । जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन नै गरेपछि कार्यक्रम हुनु केही दिन अघि सरकार यो सम्मेलनको आयोजकबाट पछि हटेको थियो ।
सरकारलाई एउटा विवादित सम्मेलनको आयोजक बनाउन कति आर्थिक चलखेल छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट कति फाइदा लिएका छन ? होइन भने हिन्दु राष्ट्रको यत्रो गरिमा बोकेको देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संस्कार विपरित किन इसाईका गुरुबाट सामुहिक आशिरवाद लिदैछन ?
यो पक्कै पनि लाजमर्दो विषय मात्रै होइन । चिन्ता र चाँसोको विषय पनि हो । एउटा सम्मेलनका लागि चार दिनसम्म यात्रुलाई सास्ती दिने जोर विजोर प्रणाली लागु गर्न सरकार अघि स¥यो । तिब्र आलोचनापछि सरकार अहिले पछि हटेको छ ।
नागरिकको समस्या र सास्ती नबुझ्ने सरकार के तानाशाहीको अभ्यास गरिरहेको छ ? होइन भने एउटा संस्था र सम्मेलनका लागि देशका प्रधानमन्त्रीले यति धेरै त्याग गर्नुपर्ने देखिदैन ।
यसकारण नेपाललाई खतरा छ !
२०६२/६३ आन्दोलनपछि नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरियो । यसका लागि विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाले तत्कालिन माओवादी र एमाले नेताहरुलाई अर्बौ पैसा दिएको चर्चा अहिले पनि छ ।
केहीले किटान गरेरै तत्कालिन एमाले नेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र अहिलेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पैसा खाएको आरोप लगाउँछन । यसको पुष्टि अहिलेसम्म कतैबाट भएको छैन । यो नहोस पनि ।
तर ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देशका प्राय सबै ठाउँमा इसाई धर्म प्रचार गर्नेको अभियान बढेको छ । हिन्दुहरुलाई जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराएर इसाई बनाइदैछ ।
यसका लागि विदेशी संस्थाहरुले नेपालमा कार्यालय खोलेर धर्म प्रचार गर्ने ठेक्का लिएका छन । तर उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास लगायतका परियोजनामा काम गर्छन । भित्री उद्देश्य भने धर्म परिवर्तन नै रहेको त्यहाँ कार्यरत मानिसहरु बताउँछन ।
के अब यसबाट नेपाललाई खतरा छैन ? अहिले सतहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र धर्म प्रचारका मुख्य व्यक्ति भनेर चिनिएका पुर्व मन्त्री समेत रहेका एकनाथ ढकालको कनेक्सनले यही पुष्टि गर्दैन त ?
नेपालमा खुलेआम लगानी भित्र्याउने नाममा विदेशी इसाई धर्म प्रचार गर्ने संस्थालाई प्रवेश गर्न दिने मामलामा ओली सरकार उदार बन्दैछ । यसका लागि एकनाथ ढकाल जस्ता व्यक्तिको हात छ भन्नेको जमात बढेको छ ।
यदि अहिले नै धर्म प्रचारका अभियान बोकेर हिड्ने यस्ता संस्था र व्यक्तिलाई राज्यले निरुत्साहित नगर्ने हो भने ओलीले देश समृद्ध बनाउने होइनन् । भोलि नेपाललाई धार्मिक युद्धतर्फ धकेल्ने वातावरण तयार पार्दैछन ।
यसका लागि चनाखो भएर नयाँ कदम चालिएन भने सारा नेपालीलाई खतरा छ ।
२०७५, १५ मंसिर, 09:30:40 AM
प्रधानमन्त्री ओली हिन्दु हुन की क्रिष्चियन ?
जोर बिजोर प्रणालीले उपत्यकामा यात्रुलाई सास्ती
बालुवाटारबाटै सरकार चलाउदै ओली, सिंहदरबार जादैनन् !